Kedu ụdị ụdị nkwaga dị? You maara ha niile? | Akụkọ Njem
Monica sanchez | | Atụmatụ, General
Ihe dị iche ụdị nke mpụga soro na mmalite nke mmalite nke ihe a kpọrọ mmadụ site na ọchịchọ na-enweghị isi gaa n'ihu. Ọ bụ ọchịchọ a mere anyị ụdị ahịhịa jisiri ike na-achị n'akụkụ niile nke ụwa, ruo n'ókè nke na e nwere ndị bi ọbụna na mpaghara ndị dị n'akụkụ okporo osisi na ndị nke ọzara.
Ya mere, site na mbido anyị dịrị ndụ, anyị ejirila ebe obibi anyị n’otu mpaghara dochie mpaghara ọzọ; ya bu, anyi akwagala. Ugbu a ọ bụ ihe anyị na-eme ma ọ bụrụ na anyị na-aga njem na mba ma, n'ihi na anyị nwere mmasị na ya nke ukwuu, anyị kpebiri ịnọ na ibi. Ma, You maara ụdị ụdị njem mmadụ ọ bụla dị?
Enwere ike ịkọwa ọpụpụ mmadụ n'ụdị atọ: dịka oge si dị, dabere na agwa na dịka ebe ha si. Ka anyị lee ụdị nke Mbugharị ọ bụla iche iji ghọta ha nke ọma:
1 Ofdị mpụga dịka oge
2 Ofdị mpụga dịka agwa
3 Ofdị mpụga dịka ebe a na-aga
4 Gịnị mere anyị ji kwaga mba ọzọ?
5 Mmetụta dị mma na nke na-adịghị mma nke ụdị mpụga
5.1 Nsonaazụ dị mma
5.2 Nsonaazụ ọjọọ
6 Ọchịchọ ịmata banyere Mbugharị
Ofdị mpụga dịka oge
Typedị Mbugharị a bụ nke na-ewere ọnọdụ n’obere oge, ewere na ndị nke nwa oge, yana nke a rụrụ na-adịgide adịgide, weere dị ka na-adịgide adịgide. Okwesiri ighota na ngbaghari mmadu nke nwa oge bu ndi ndi akwaghari na alaghachi na ebe ya mgbe oge di iche.
Ofdị mpụga dịka agwa
Dabere n’ihe na-akpali anyị ịhapụ ebe anyị si malite, ndị mbugharị mmanye, nke aha ya na-egosi, bụ nke a na-amanye mmadụ ịhapụ ala ya iji dịrị ndụ; ma ọ bụ mbugharị afọ ofufo nke bụ mgbe onye si mba ọzọ hapụrụ ụlọ obibi nke aka ya n’onwe ya.
Ofdị mpụga dịka ebe a na-aga
Na ụdị Mbugharị anyị na-amata ọdịiche dị na mpụga nke obodo, nke bụ mgbe a na-aga otu obodo; ma ọ bụ mba ofesi mgbe ị nọ na mba ọzọ.
Gịnị mere anyị ji kwaga mba ọzọ?
Mụ mmadụ ha na-achọkarị ezigbo ebe obibi, n'agbanyeghị ọnọdụ ha na ọnọdụ akụ na ụba ha. N'ime afọ ndị gara aga mbata na ọpụpụ abụrụla okwu a na-ekwu kwa ụbọchị: ndị si mba ndị na-emepe emepe gafere ọdọ mmiri ahụ ịchọ nri, ọrụ na nchekwa. Ọtụtụ n’ime ha na-etinye ndụ ha n’ihe ize ndụ, ebe ọ bụ na onye ọ bụla maara na ọ bụghị mgbe nile ka ha na-abịa n’ụzọ ndị kwesịrị ekwesị nke njem. Ma e nwere ọtụtụ ihe ha nwere ike inweta; e kwuwerị, ebe ọ bụla dị mma karịa ebe agha tisasịrị.
N'aka nke ọzọ, na dịka anyị kwuburu na mbụ, ọ bụrụ na onye ọ bụla n'ime anyị aga njem, ka ihe atụ, New York na ọ na-egosi na ha nwere mmasị ihu igwe, ndị mmadụ, ebe ahụ, na ha nwekwara ohere nke ịchọta ọrụ, O yikarịrị ka ị ga-atụle ibi ebe ahụ nwa oge ma ọ bụ, onye maara, ikekwe na-adịgide adịgide. Anyi ga-abata ndi New York na ndi kwabatara n’obodo anyi, mana n’oge n’adighi anya anyi nwere ike ibi ndu anyi n’ebe ahu n’enweghi nsogbu.
Ihe ọzọ mere anyị jiri kwaga mba ọzọ bụ maka ọdachi ndị na-emere onwe ha, obu ala oma oma, ide mmiri, udu mmiri, wdg. Ọ bụrụ na ị bi n’ebe ebe ọdachi na-adịkarị, ị nwere ike ichere ka e wuo ụlọ ndị na-eguzogide ha, mana nke a nwere ike ịdị oke egwu, yabụ ị na-ahọrọkarị ịchọ ebe obibi dị nchebe na mpaghara ọzọ nke ụwa obodo ma ọ bụ ọzọ.
Mmetụta dị mma na nke na-adịghị mma nke ụdị mpụga
Ukem nte kpukpru ndaha, emi ekeme ndinyene nti nkpo nno ebiet emi otode ye ebiet emi akade.
N'etiti nsonaazụ niile dị mma, ekwesiri ịmara na na mba mbido nrụgide igwe mmadụ na akụ na-ebelata na enweghị ọrụ na-ebelata, na mgbakwunye na ịnwe nnwere onwe maka ndị karịrị ọnụ ọgụgụ; n'ihe banyere mba na-aga, e nwere onu ogugu ndi mmadu, ọdịbendị dịgasị iche iche na arụpụtaghị ihe na-abawanye.
Maka obodo mbido, ndị kachasị ama dị elu karịa ihe niile ịka nká na ịdalata n ’ụtụ ọha na-enweta. Ndị na-eto eto nọ n’afọ ndụ ọrụ bụ ndị mbụ na-ekpebi ịhapụ, nke a na-ebute nsogbu maka ebe sitere.
N'aka nke ọzọ, mba ebe aga-eche ihu a Belata ụgwọ ọrụ na mpaghara ụfọdụ maka nrigbu ọrụ nke ndị kwabatara, ndị na-anabata ịrụ ọrụ siri ike maka obere ụgwọ.
Ọchịchọ ịmata banyere Mbugharị
Na mgbakwunye na ihe ekpughere ruo ugbu a, ọ bụ ihe na-akpali mmasị ịmara na enwekwara nguzozi maka mpụga ma ọ bụ Onodu ogwe, nke bụ ihe dị iche n’etiti mbata na ọpụpụ (ndị na-ahapụ) na mbata na ọpụpụ (ndị na-abịa na-anọ). Mgbe mbata na ọpụpụ dị ukwuu karịa njem, a na-ewere nguzogharị mpụga dị ka ihe dị mma, na-adịghị mma ma ọ bụghị.
Ọchịchị onye ọka iwu Robert Owen (1771-1858), nke si Welsh, mere atụmatụ obodo a kpọrọ New Harmony, nke a ga-ewu na Indiana (United States). Echiche bụ inye ụlọ na ọrụ maka ndị kwabatara, ọ bụ ezie na n'ikpeazụ, amabeghị ya. N'agbanyeghị ihe niile, ọ kpatara ọtụtụ ọrụ na-ahụghị ụbọchị, ọkachasị n'ihi nkwado nke ndị kwabatara n'onwe ha. N'ime ihe niile anyị gosipụtara obodo satịlaịtị (dika na Maipú na Chile, Quezón nke dị na Philippines ma ọ bụ New City nke Belen na Peru), na atụmatụ nke obodo ndị dị na Latin America, ma ọ bụ mmezi nke mpaghara ókèala na Haiti site na Dominican Republic.
Anyị nwere olile anya na anyị ekpebiela obi abụọ ị na-enwe banyere mbugharị mmadụ dị adị.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » njem » Atụmatụ » Ofdị mpụga